अमिताभ बच्चनको घरमा दिपावली : जया किन खुशी देखिइनन्?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अमिताभ बच्चनको घरमा दिपावली : जया किन खुशी देखिइनन्?
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनले बुधवार राति आफ्ना परिवारसँग दिपावली मनाएका छन्। परिवारसँग दिपावली मनाएको बच्चन परिवारको तस्वीर यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल भएका छन्।
फोटोमा अमिताभकी पत्नी जया बच्चन, छोरा अभिषेक बच्चन, बुहारी ऐश्वर्या र नातिनी आराध्य एकसाथ देखिएका छन्। फोटोमा पूरा परिवार पूजास्थलमा फोटोको पोज दिइरहेका छन्।
यद्यपी फोटोमा जया बच्चन त्यति धेरै खुशी देखिएकी छैनन्। कतिपयले कुनै कुराले गर्दा जया बच्चन रिसाएकी हुन सक्ने बताएका छन्।
जया बच्चनले मुख फुलाएर बसेको भन्दै सामाजिक संजालमा उनलाई ट्रोल गर्न थालिएको छ।
एकजना सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्–जया बच्चनजीको अनुहारमा त आज पनि खुशी देखिँदैन। उनको लडाइँ स्वयं सँग हो।’ अर्का एकजनाले लेखेका छन्–जयाजीको समस्या के हो? यस्तो लाग्छ उहाँलाई कुनै पनि कुराको इच्छा छैन।’